Kheyraadka dhalinyarada - Abaalmarinta Abaalmarinta, Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Adiga kugu saabsan Kheyraadka loogu talagalay dhalinyarada
Haa, gabi ahaanba waa dabiici dabiiciga ah in dhallin-yarada ay xiiseeyaan galmada, gaar ahaan inta lagu jiro iyo ka dib qaangaarka, laakiin nooca galmada ee ka muuqda sawirada qaawan ee internetka looma qaabaynin inay kaa caawiso inaad hesho aqoonsigaaga dhabta ah ee galmada ama aad wax ka barto xiriirka jaceylka. Taa bedelkeed ujeeddadiisu waa inay kiciso caadifadaha noocaas ah ee kugu dhex jira oo aad rabto inaad dib ugu sii laabato waxbadan.
Filimada qaawan ee internetka waa warshado ganacsi oo qiimahoodu yahay balaayiin rodol. Waxay u jirtaa inay kaa iibiso xayeysiinta oo aad soo aruuriso macluumaadkaaga adiga kugu saabsan oo laga iibin karo shirkadaha kale faa iido. Ma jiraan wax la mid ah websaydhka sinnada bilaashka ah. Khatar ayaa ku ah caafimaadkaaga maskaxda iyo jirka, horumarka xiriirka, gaaritaanka iskuulka iyo ku lug lahaanshaha fal dambiyeed.
Sidee u egtahay inuu ka mid noqdo dhallinta badan ee ku xirxirta lebbiska? Sidee ayaad uga fogaan kartaa lebbiska? Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah talobixinta ka soo kabashada balwadaha Gabe Deem iyo Jace Downey.
Gabe Deem wuxuu ka hadlayaa adeegsiga qaayaha iyo siduu u helay inuu dhibaato ku qabo (1.06)
Gabe wuxuu nagu qaadanayaa sheekadiisa soo kabashada (1.15)
Jace downey wadahadal lala yeesho Mary Sharpe. Safarka Jace ee kufsiga iyo ladagaalanka (2.02)
Saamaynta maskaxda ee lebbiska
The saameynta maskaxda ee filimada waxay si gaar ah u daran yihiin markaad dhallinyar tahay. Waxay saameyn kugu yeelan karaan sanadaha soo socda. Maanta waa maalinta ugu fiican ee waxbadan la barto oo la bilaabo safar lagu wanaajinayo noloshaada bilaa porn!